Baloteli oo ka hadlaya Euro-ga: Dalkan ayaa ugu cad cad hanashadiisa balse waxaan la rabaa in saaxiibkeey……….ku guuleysto – Gool FM
Baloteli oo ka hadlaya Euro-ga: Dalkan ayaa ugu cad cad hanashadiisa balse waxaan la rabaa in saaxiibkeey……….ku guuleysto
Kaafi July 7, 2016
(Paris) 07 Luulyo 2016. Mario Baloteli waxa uu aaminsan yahay in Germany ay ugu cad cadahay ku guuleysiga Euro 2016 laakiin waxa uu rajeynayaa in France ay axada libinta qaadato.
Germany oo haysata koobka aduunka ayaa wajahaysa France oo iyadu tartankan martigalibeysa kulan ka tirsan afar dhamaadka Euro-ga, mida adkaata waxa ay fiinaalaha la ciyaari doontaa Portugal oo Stade de France ka dhici doona Axada.
Mar Goal ay weydiisay in uu dareensan yahay Germany in ay tahay kuwa ku cad cad hanashada koobka, Baloteli oo gudanaya doorkiisa safiirnimo ee PUMA ayaa ku jawaabay: “Ujeedo ahaan, haa, laakiin hadana waxaan u rajeynayaa France maxaa yeelay saaxiibkey Paul Pogba ayaan doonayaa in uu guuleysto.
“Germany 2012 ayaa ka yara awood badnaa kuwa hada laakiin Germany mar walba waa koox xoogan. Waxaan ka hadlayaa waxaayabaha yar yar, qodobo. Kooxdii aan wajahnay 2012 ayaa kuwan ka adkaa laakiin xitaa Jarmalka aad ayey u wacan yihiin.”
Baloteli sidoo kale waxa uu qabaa in France ay ku duuleyso ciyaaryahanka ugu bandhigyada wanaagsan Euro 2016 Dimitri Payet.
“Si wanaagsan ayuu tartanka u dheelay,” ayuu yiri. “Go’aamiye ayuu ahaa tan iyo kulankii bilowga.
“Laakiin kulan qura ayaa badali kara taariikhda Eur-ga waana in aynu iska sugnaa ilaa iyo ciyaarta kama dambeysta ah.”
Abaalmarinaddii loogu tala galay Koobka Ramadaanka Gothenburg oo la bixiyey + Sawirro
Sawirro Xul ah: Dabaal degga ciida iyo magacyada shirkadihii ka qeyb qaatay